प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुले बालुवाटारमा रोपिन् तुलसी – Tufan Media News
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुले बालुवाटारमा रोपिन् तुलसी
५ श्रावण २०७८, मंगलवार ११:२८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाले तुलसी रोपेकी छन्। हरिशयनी एकादशीको अवसरमा उनले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा तुलसी रोपेकी हुन्।
सामाजिक सञ्जालमा मंगलबार तस्बिर ‘पोस्ट’ गर्दै राणाले लेखेकी छन्, ‘जय तुलसी माता ! आज हरिशयनी एकादशी पर्वमा प्रधानमन्त्री निवासमा तुलसी रोपेर माताको आशिर्वाद लिइयो। हरिशयनी एकादशीको मंगलमय शुभकामना।’एक महिनाअघि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा तुलसी मोठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ।
यो पनि समाचार: गुल्मि जिल्लाको इस्मा गाउपालिका ,साउदिमा भोजराज कुमाल करिब आठ महिनाबाट जीवन बे’थित गरिरहेका छन् । काम गर्ने क्रममा मेसि’नमा दु’बै खु’ट्टा परेपछि दुबै खु’ट्टा गु’माएका छन ।
आमा बुवाका साथमा दुई छोराछोरी बस्दै आएका छन् । घरबार नभएको उक्त परिवार अहिले अरुकै घरमा बास मागेर बास बस्दै आइरहेका छन् । बुढेसकालमा बुवाले बिवाह गर्दैगर्दा उहाका पनि दुई छोरिहरु छन् । लगभक ६ जनाको परिवारको अहिले बि’चल्लि भएको छ । श्रीमान यस्तो अवस्था हुदैगर्दा आफ्नो छोराछोरी समालेर दुख सुख परिवारसगै बस्नुपर्नेमा सबै छोडेर गएकाले ती छोराछोरीको यति सानै उमेरमा मस्तिष्कमा नराम्रो असर पारेक छ । आमाको अभाव त छ नै । आउने बाटो केही पनि नहुदा र आर्थिक अवस्था शून्य बराबर हुदैगर्दा परिवार भोक भो कै बस्न बिबश छन् ।
अहिले भने सानि छोरी बिनिता र साउदिको अ’स्पतालमा उप’चारको क्रममा रहेका आफ्ना पितासग फोन मार्फत कुरा गर्दै आफुलाई छो डेर जाने ममिको धेरै याद आउने गरेको उनले बताइन । साथै छिटो नि को भएर घर आउन आफ्नो बुवालाई उनिले भनेसगै उनिले आफ्ना बुवालाई अर्कि म’मि ल्याउने हो या हैन भन्दै प्रश्न गर्दा सबैजना एकदमै भावुक समेत भए ।
एउटा खु’ट्टाको लागि करिब दशपटकसम्म अ’प्रेसन गरेको भोजराज बताउँछन् । आफुले छोरिले भनेजस्तो अर्को बिवाह त मेरो बाबाले कतै गर्ने हैन भनेजस्तै आफुलाई अहिले बिवाह गर्ने कुनैपनि मनसाय नभएको र श्रीमती अन्यत्र लागेको आफुलाई पहिले नै थाहा भएको र बारम्बार उनिले भनिरहने गरेको श्रिमानले बताए ।
आफू निको भएर आफुलाई घर आउने चाहा अत्याधिक भएको तर आफ्ना खु’ट्टाहरु निको नभएसगै आफू आउन नपाएको गु नासो पनि उनले गरे । आफू काम गर्ने क्रममा यसरी मे सिनमा पर्नु दु र्भाग्य भएको उनले बताए । छोरिलाई पनि उनले धेरै माया सहित यसरि सम्झिए साथै आफ्नो गइसकेको श्रिमतिउपर टिप्पणी गर्न खोजेर समयलाई खर्चिलो नबनाउने उनको निष्कर्ष थियो।